Canada oo lagu qasbay inay qashinkeeda la noqoto - BBC News Somali
Canada oo lagu qasbay inay qashinkeeda la noqoto
Dowladda Canada ayaa sheegeysa in ay dib u ceshan doonto dhawr tan oo ah qashin oo sanaddo ka hor inta maraakiib lagu raray loo dhoofiyay dalka Philippines, arrintaasi oo keentay khilaaf diblomaasiyadeed oo u dhaxeeya labadani dal.
Go'aankan dowladda Canada oo ka soo baxay wasiirka arrimaha deegaanka ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweynaha dalkaasi Philippine, Rodrigo Duterte, uu amar ku bixiyay in qashinkaasi dib loogu celiyo dalka Canada.
Dowladda Philippine ayaa dhawr jeer oo hore cabasho ka muujisay qashinkaasi oo dalkeeda la keenay intii u dhaxeysay sanaddadii 2013 ilaa 2014.
Xujo-furka 'Qashin Uruurinta' ee baraha bulshada oo aad loo bogaadiyay
Shirkad gaar loo leeyahay ayay dowladda Canada u xilsaartay in qashinkaasi ay dalkeeda dib ugu soo celiso maalmaha soo socda.
Wasiirka arrimaha deegaanka ee Canada, Catherine McKenna, ayaa shalay oo Arbaca ahayd sheegtay in dowladdeeda ay bixin doonto gebi ahaanba kharashka ku baxaya dib u soo celinta qashinkaasi, kaa oo la filayo in ugu dambeyn dhammaadka bisha dambe ay la soo wareegi doonto dowladda Canada.
Xukuumadda Manila ayaa usbuucii la soo dhaafay u yeeratay safiirkeedii u fadhiyay Ottowa, ka dib markii dowladda Canada ay u suurtageli weyday in qashinkaasi ay ku celiso dalkeeda wakhtigii kama dambeysta ahaa ee loo qabtay oo ku ekaa 15-ka bishan May.
"Sababo la xiriira dib u dhacaasi ayaa madaxweynaha dalka waxa uu ku amray xafiiska ay arrintani khuseyso in shirkad gaar loo leeyahay uu u xilsaaro in qashinkaasi dib loogu celiyo xudduudaha dalka Canada," ayuu yiri Salvador Panelo oo ah afhayeenka madaxweyne Duterte.
"Haddii dowladda Canada ay diido in ay dib u qaadato qashinkaasi, waxaan qashinkaasi dhigi doonaa xeebta dalka Canada ama meel u dhow xeebaha dalkaasi.
Duterte oo aad ugu caan baxay hadallada kulul ayaa bishii la soo dhaafay ku hanjabay in qashinkaasi uu dib ugu celin doono dalka Canada, waa haddii buu yiri arrintaasi wax heshiis ah laga gaari waayo.
Muranka labadani dal ayaa salka ku haya koonteenarro qashin ah oo markab ay ku rartay shirkad laga leeyahay dalka Canada ka dibna laga dejiyay dekad ku taal dalka Philippine.
Xukuumadda Manila ayaa sheegeysa in qashinkaasi oo hadda yaal dekad ku taal magaalada Manila lagu soo calaamadeeyay in ay yihiin waxyaabo caag ka sameysan oo la doonaya in dib loo soo farsameeyo.
Lahaanshaha sawirka MAGESWARI SANGARALINGAM
Qashinkaasi ayay xukuumadda Manila ku sheegtay in uu u badan yahay waxyaabaha laga soo qaaday guryaha ee sida cunnada soo hartay iyo waxyaabo la mid ah.
Baaritaan sanadkii 2015 lagu sameyay qaar ka mid ah koonteennaradani ayaa lagu ogaaday in waxyaabo aan kiimiko ahayn ay ka buuxaan, kuwaasi oo u badan qashinka guryaha iyo waddooyinka laga soo uruuriyay.
Dowladda Philippine ayaa sheegeysa in koonteennaradaasi ay ciriiri ku keeneen dekadda Manila isla markaana ay halis ku yihiin caafimaadka shacab weynaha dalkaasi.
Inkastoo qaar ka mid ah koonteenarradani qashinka ka buuxa qaarkood lagu gubay meel qashin qub ah, haddana inta badan qashinkaasi wuxuu yaal dekkadda Manila.
Sanadkii 2016, maxkamad ku taal dalka Philippine ayaa amar ku bixisay in qashinkaasi dib loogu dalka Canada, kharashka ku baxayana ay bixiso dowladda dalkaasi.
Isla sanadkaasi ayaa dowladda Canada waxa ay wax ka baddashay sharciyada dhoofinta qashinka si mustaqbalka aysan u dhicin arrintan oo kale.